Masoivoho Frantsay Miato avokoa ireo asa eto Antananarivo
Ankisirasira Morondava Grenady mahery vaika saika nampidi-doza
Nahitana grenady mahery vaika tao Ankisirasira, Morondava. Tao anaty « sachet » mainty io fitaovam-piadiana mahery vaika, vita sôvietika, io ary ankizy nilalao no nahita azy ny tolakandron’ny sabotsy teo,
Barson Rakotomanga “Famonoana mpiasa izany fitrosana izany”
Nanamafy ny Filoha Rajoelina ny alin’ny 09 aogositra, fa afaka mindram-bola tsy zanany 200 000Ar hatramin’ny 500 000Ar haloha 10%
ZOTO Mianakavy Mbola hitety an’i Madagasikara
Ao amin’ny Fokontany Aranta ao Mahajanga no misy an-dRandrianarison Maurice sy ireo zanany 3 amin’izao fantatry ny maro amin’ny anarana hoe : Zoto.
Tanandava Imerimandroso Naolan’ny mpanotra azy ilay tovovavy
Nitrangana toe-javatra mampalahelo tao Tanandava Imerimandroso. Tovovavy kely iray vao 14 taona monja no naolan’ny mpanotra azy, lehilahy iray izay efa 48 taona.
Tsy fisian’ny fiara mpitatitra Reraky ny dia an-tongotra ny mpiasa
Nitondra fanampim-panazavana ny minisitry ny asa sy ny lalàna sosialy omaly, fa afaka miasa hatramin'ny 5 ora hariva ireo orinasa rehetra amin'ny sehatra tsy miankina, tafiditra ao anatin'izany ny mpivarotra sy hotely.
Malagasy tavela any ivelany Ny minisitera no manapaka izay mody voalohany
Nanamafy ny minisitry ny raharaham-bahiny omaly fa teratany malagasy hatramin` ny 1 600 isa no efa voaraikitra eo anivon` ny ministera ka efa afaka mody an-tanindrazana.
Fanampiana Hahazo Vatsy Tsinjo ireo mpamily Taksibe
Mbola mikatona araka ny efa nambaran’ny filoham-pirenena ny alahady alina lasa teo hoy izy ny zotra nasionaly ary mbola tsy azo atao ny mivoaka sy miditra an’Analamanga.
Manoloana ny fepetra noraisin` ny fitondram-panjakana mahakasika ny fihibohana eto amin`ny faritra Analamanga, dia nanatanteraka fivoriana entina iatrehina izany (cellule de crise) ao amin’ny masoivoho frantsay.
Noho izany, miato indray ny fandraisana olona manan-draharaha eny anivon` ny masoivoho, toy ny fangatahana fahazoan-dalana manokana hivezivezy (visa) any Frantsa eo anivon` ny TLS. Ireo “services consulaires” kosa dia hisahana fotsiny ireo raharaha maika. Marihana fa ny 28 jona lasa teo no niverina niasa indray ny sampandraharaha misahana ny famoahana “visa” saingy mbola voafetra ihany koa ireo afaka mangataka izany “visa” izany toy ireo mpianatra maniry hianatra any Frantsa; ny vady aman-janak’ireo teratany frantsay; ireo mpiasa hamita iraka any Frantsa. Ny sokajy hafa kosa dia tsy maintsy miandry ny famerenana amin` ny laoniny ny sidina Madagasikara sy Frantsa.